mpanamboatra tilikambo telecom - orinasa mpanamboatra telecom tower China, mpamatsy
Pote Antenna Raha tsy mihoatra ny 6 metatra ny haavon'ny valindrihana amin'ny antonony dia asaina mampiasa ny tsangantsangana anteno ambony tafo. Amin'ny ankapobeny 4-9 metatra ny haavon'ny antena, matetika ahantona 1-3 antennas, vita amin'ny D = 60-89 fantsom-by vy, miaraka amina vy kely misy halavany 500mm eo an-tampony, ary mety ho nitaingina rindrina na tsy miankina Sa tsipika hisarika. Fampisehoana vokatra vita amin'ny tsato-kazo fifandraisana: endrika bongo boribory ampiasaina matetika, tsara tarehy, tsotra ary mirindra; Famaritana isan-karazany ...
monopole dia tilikambo milanja vy lava mijoro irery miaraka amina fantsom-by mitete ho tena rafitra lehibe. Manana endrika bika sy firafitra tsotra izy io. Ny faritra amin'ny vatan'ny tilikambo dia boribory na polygonal. Manana dian-tongotra kely sy fampisehoana vidiny lafo izy io. Ampiasaina amin'ny sehatry ny fifandraisana izany; Ny modeling dia mizara ho / sehatra karazana tilikambo fantsona tokana, tilikambo tokana fantsom-baravarankely, tilikambo karazana hazo hazavana, tilikambo misy kodiarana roa, tilikambo hazo bionika, sns.